Adreesị weebụsaịtị anyị bụ https://www.linuxcapable.com.
Ọ bụrụ na ịhapụ nkọwa na saịtị anyị, ị nwere ike ịbanye na ịchekwa aha gị, adreesị ozi-e, na weebụsaịtị na kuki. Ndị a bụ maka ịdị mma gị ka ị ghara dejupụta nkọwa gị ọzọ mgbe ị na-ahapụ nkọwa ọzọ. Kuki ndị a ga-adịru otu afọ.
Anyị ga-edozi ọtụtụ kuki iji chekwaa ozi nbanye gị yana nhọrọ ngosipụta ihuenyo mgbe ị banyere. Kuki nbanye na-adịru ụbọchị abụọ, na kuki nhọrọ ihuenyo na-adịru otu afọ. Ọ bụrụ na ịhọrọ "Cheta M," nbanye gị ga-adịgide ruo izu abụọ. Ọ bụrụ na ịpụ na akaụntụ gị, a ga-ewepụ kuki nbanye.
Ọ bụrụ na ị dezie ma ọ bụ bipụta akụkọ, a ga-echekwa kuki agbakwunyere na ihe nchọgharị gị. Kuki a enweghị data nkeonwe ma na-egosi ID nzi ozi nke akụkọ ị deziri ugbu a. Ọ na-ekubi ume ka otu ụbọchị gachara.
Webụsaịtị a na-eji Pro Mgbasa ozi dị elu idowe mgbasa ozi. Ngwa mgbakwunye WordPress nwere ike iji ọtụtụ kuki ndị mbụ iji hụ na njikọta nke mgbasa ozi ziri ezi. Kuki ndị a na-echekwa ozi teknụzụ mana ọ bụghị adreesị IP. Ejikọtara ojiji ha na njirimara na nhọrọ ndị akọwapụtara mgbe ị na-etinye mgbasa ozi.
Biko, hụ Ozi kuki Mgbasa ozi dị elu maka nkọwa ndị ọzọ.
Akụkọ dị na saịtị a nwere ike ịgụnye ọdịnaya agbakwunyere (dịka ọmụmaatụ, vidiyo, onyonyo, akụkọ, wdg). Ọdịnaya agbakwunyere na webụsaịtị ndị ọzọ na-akpa agwa dịka a ga-asị na onye ọbịa gara na webụsaịtị nke ọzọ.